Aịzaya 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Asiria ga-abịa lụso ndị Juda agha (1-8)
Unu atụla egwu, “Chineke nọnyeere anyị!” (9-17)
Aịzaya na ụmụ ya bụ ihe na-egosi ihe Jehova zubere (18)
Sinụ n’iwu Chineke mata ihe unu chọrọ ịmata, unu ajụla ndị mmụọ ọjọọ ase (19-22)
8 Jehova gwara m, sị: “Were mbadamba osisi buru ibu,+ jiri mkpịsị akwụkwọ nkịtị* dee ‘Meha-shalal-hash-baz’* n’elu ya. 2 Achọrọ m ka ndị a tụkwasịrị obi, ya bụ, Yuraya+ onye nchụàjà na Zekaraya nwa Jeberekaya, dee* na ha hụrụ mgbe e dere ya.” 3 Mụ na nwunye m, bụ́ onye amụma nwaanyị, wee nwee mmekọahụ,* ya adịrị ime, mechaakwa mụọ nwa nwoke.+ Jehova wee sị m: “Gụọ ya Meha-shalal-hash-baz, 4 n’ihi na tupu nwata ahụ amata otú e si akpọ ‘Papa’ na ‘Mama,’ a ga-ebugara eze Asiria akụ̀ Damaskọs na ihe a kwatara na Sameria.”+ 5 Jehova gwakwara m, sị: 6 “Ebe ọ bụ na ndị a ajụla mmiri Shaịloa* nke na-asọ nwayọọ nwayọọ,+Na-achịkwa Rizin na nwa Remalaya ọchị,+ 7 Jehova ga-eziteEze Asiria+ na ebube ya niile ka ọ lụso ha agha. Eze a na ndị agha ya ga-abịa ngwa ngwaOtú nnukwu mmiri bụ́ Osimiri Yufretis si eto,Tochie ebe niile, sọrọ pụta n’elu ala, 8 Sọrọkwa gafee Juda. Ọ ga-etoju ebe niile na Juda, na-eru mmadụ n’olu, sọrọkwa na-aga.+ Ọ ga-eju ebe niile n’alaGịnwa bụ́ Ịmanuel.”*+ 9 Merụọnụ ha ahụ́, unu ndị dị iche iche, ma a ga-etipịa unu. Geenụ ntị, unu ndị niile nọ n’ebe ndị dị anya n’ụwa! Jikerenụ agha,* ma a ga-etipịa unu!+ Jikerenụ agha, ma a ga-etipịa unu! 10 Meenụ atụmatụ, ma a ga-akụghasị ya! Kpaanụ ụdị nkata ọ bụla, ma ọ gaghị enwe isi,N’ihi na Chineke nọnyeere anyị!*+ 11 Mgbe Jehova na-agwa m okwu, ọ tụkwasịrị m aka ya siri ike, gwakwa m ka m ghara ịkpa àgwà ka ndị a. Ọ gwara m, sị: 12 “E nwee ihe ọ bụla ndị a kpọrọ mgba okpuru, unu esola ha akpọ ihe ahụ mgba okpuru. Unu atụkwala egwu ihe ha na-atụ egwu. Unu amakwala jijiji n’ihi ya. 13 Chetanụ na ọ bụ naanị Jehova nke ụsụụ ndị agha dị nsọ.+ Ọ bụ ya ka unu kwesịrị ịna-atụ egwu,Ọ bụ ya kwesịrị ime ka unu na-ama jijiji.”+ 14 Ọ ga-adị ka ụlọ nsọ,Ma ọ ga-aghọrọ alaeze abụọ dị n’IzrelNkume na-akpọbi mmadụ ụkwụ+Na oké nkume na-akwada mmadụ. Ọ ga-aghọkwara ndị bi na JeruselemIgbudu na ọnyà. 15 Ọtụtụ n’ime ha ga-azọhie ụkwụ daa, merụọkwa ahụ́. A ga-amata ha n’ọnyà, jidekwa ha. 16 Pịachie ihe ahụ i dere.* Zoo iwu* ahụ e nyere ndị na-eso ụzọ m. 17 M ga na-atụ anya Jehova,+ onye kpuchiri ihu ya ka ezinụlọ Jekọb ghara ịhụ ya.+ M ga-enwe olileanya na ya. 18 Leenụ mụ na ụmụ Jehova nyere m.+ Anyị bụ ọrụ ebube, bụrụkwa ihe na-egosi ndị Izrel ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha, onye bi n’Ugwu Zayọn, zubeere ha.+ 19 Ọ bụrụ na ha asị unu: “Jụọnụ ndị na-agba afa ma ọ bụ ndị na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu ase, bụ́ ndị na-ebe ubé ka nnụnụ, na-ekwukwa okwu n’olu dị ala,” ùnu kwesịrị ime ihe ha kwuru? Ọ́ bụghị Chi ndị obodo ọ bụla ka ndị obodo ahụ kwesịrị ịna-ajụ ase? Ùnu kwesịrị ịjụ ndị nwụrụ anwụ ase gbasara ndị dị ndụ?+ 20 Mba, kama unu kwesịrị isi n’iwu Chineke nakwa n’ihe ndị ọzọ o kwuru* mata ihe unu chọrọ ịmata. Ọ bụrụ na ihe ha na-ekwu abụghị ihe Chineke kwuru, ha enweghị ihe na-enye ha ìhè.+ 21 Ihe ga-esiri onye ọ bụla na-agafe n’obodo a ike. Agụụ ga na-agụkwa ya.+ N’ihi iwe juru ya obi maka agụụ na-agụ ya, ọ ga-eleli anya elu kparịa ma eze ya ma Chineke ya. 22 Ọ ga-elekwa anya n’ụwa, ma naanị ihe ọ ga-ahụ bụ nsogbu na ọchịchịrị, ihe na-emenye mmadụ ụjọ na ihe isi ike, ihe mgbu na itiri.
^ Na Hibru, “mkpịsị akwụkwọ mmadụ.”
^ O nwere ike ịbụ na Meha-shalal-hash-baz pụtara “Ịgbaga Ngwa Ngwa n’Ebe A Ga-akwata Ihe, Ịbịa Ngwa Ngwa n’Ebe A Ga-akwakọrọ Ihe.”
^ Ma ọ bụ “gbaa akaebe.”
^ Na Hibru, “M wee garuo onye amụma nwaanyị nso.”
^ Shaịloa bụ okpo mmiri.
^ Gụọ Aịza. 7:14.
^ Ma ọ bụ “Keenụ ájị̀ n’ume.”
^ Okwu Hibru bụ́ Ịmanuel pụtara “Chineke nọnyeere anyị.” Gụọ Aịza. 7:14; 8:8.
^ Ma ọ bụ “ihe akaebe ahụ.”
^ Ma ọ bụ “n’ihe akaebe ahụ.”